Ukusukela ngoku ukuya phambili uya kwabelana ngomxholo we-Adobe kwiMicrosoft Word | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba ungumsebenzisi weLizwi likaMicrosoft kunye nePowerPoint .
Intengiso iyonke abanokuthi ngayo abo basebenzi abasebenzisa esi sixhobo seAdobe indlela emfutshane kwiMicrosoft Word nakwiPowerPoint. Sibonile into efanayo neDropbox kunye ne icon esivumela ukuba sabelane ngomxholo ngqo kwesinye sezona zisombululo zibalaseleyo efini.
Ngoku lixesha labo bonke ongowenkampani okanye umbutho unokufikelela ngokukhawuleza kumxholo abayifunayo kumaxwebhu eLizwi kunye neenkcazo zePowerPoint. Injongo kukunciphisa iinzame kunye nokwenza ngcono oko kuhamba komsebenzi ngokwenza intsebenziswano phakathi kwamaqela.
I-Adobe ipapashe ividiyo ebonisa ukuba olu manyano lusebenza njani phakathi kweLayibrari yamafu eLuhlu kunye nezo zimbini iiMicrosoft zokusebenza Amaxwebhu eofisi kunye nezo ntetho ziluncedo kakhulu kuzo zonke iintlobo zeenkampani, abasebenza ngokuzimela, iinkampani kunye nabasebenzisi. Sikhankanyile ukudityaniswa kweDropbox ukuze uqonde ngcono ukuba isebenza njani, kodwa siyakukhuthaza ukuba ubukele ividiyo engaphezulu nje komzuzu omnye kunye nemizuzwana engama-1 esebenza ngokukuko.
Izixhobo ezidityanisiweyo eziza kunceda abo kufuneka balandele imigca yoyilo okanye ulwimi lwentengiso ethile. Okwangoku kuya kufuneka silinde de isetyenziswe. Okwalo mzuzu uya kuba nakho ukufikelela kulomsebenzi oya kuthi ukwazi ukuzisa ngawo izinto eziyilayo Uyilo kunye neAdobe, ezinjengeelogo, iiapps, kunye nomnye umxholo kula maxwebhu eLizwi okanye kwimiboniso yePowerPoint.
Omnye I-Adobe isebenza ngokubambisana neMicrosoft ukusizisela kungekudala iAdobe Fresco yakho enkulu, Inkqubo yokuzoba ukukhuphisana neProCreate.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Adobe ibhengeza ukudityaniswa ngokuthe ngqo kwiMicrosoft Word kunye nePowerPoint
Kungekudala uza kuba nakho ukukhetha izinto ezizodwa ngesixhobo esitsha kwiAdobe Photoshop